waya ntupu belt shot ọgbụgba ọkụ igwe - China Qingdao Antai Arọ Industry
ígwè efere ichebe akara
ígwè anwụrụ elu & n'ime mgbidi shot ọgbụgba ọkụ igwe
Rolling drum shot ọgbụgba ọkụ igwe
bogie (table Trolley) shot ọgbụgba ọkụ igwe
ájá ọgbụgba ọkụ ụlọ ndò
Dustless ọgbụgba ọkụ Machine
Metal waya ntupu-echebe Mmadụ Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine adabara Aluminium anwụ anwụ-oge ọgbụgba na alloys (akpakanamde, alimentary, agbara, ọkụ, telekomunikashions, electric ngwaọrụ ubi, wdg), Oxygen-ire ọkụ ịcha akụkụ, nkedo ígwè oge ọgbụgba, ihe nkedo ígwè oge ọgbụgba, nkedo ígwè oge ọgbụgba, Brass kpụrụ iberibe.
Tụkwasịnụ Ikike: 300 tent kwa afọ
Nzipu Port: Qingdao n'ọdụ ụgbọ mmiri, China
Oge nzipu: N'ime 30working ụbọchị
Ebe si: Shandong, China (Chile)
Metal waya ntupu Belt Type gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Waya ntupu-echebe Mmadụ Machines enye elu olu, na-eri irè arụmọrụ niile metal nhazi chọrọ. Ha ga-eme nnukwu anwụ oge ọgbụgba, akpakanamde wiil, ferrous na-abụghị ferrous oge ọgbụgba, weldments, fabrications na ndị ọzọ. Waya ntupu belt usoro na-na-e-eme na okpomọkụ nke na akụkụ na-abụrịrị okpomọkụ mesoo.
Aluminum anwụ-oge ọgbụgba na alloys (akpakanamde, alimentary, agbara, ọkụ, telekomunikashions, electric ngwaọrụ ubi, wdg)
Oxygen-ire ọkụ ọnwụ akụkụ
Nkedo ígwè oge ọgbụgba
ígwè na ịpị iberibe
Brass kpụrụ iberibe
ụdị QWD60 QWD80 QWD100 QWD120
obosara (mm) 600 800 1000 1200
ọsọ 0.5-4 0.5-4 0.5-4 0.5-4
ikike 4 * 120 4 * 120 4 * 180 4 * 250
The ọrụ na-iberibe na-etinye na waya ntupu ebu na elu na-eyi ndị na-eguzogide, shot blasted ma n'elu na n'okpuru na otu ngafe site n'ume ụlọ.
Ọganihu ọsọ nke metal waya ntupu ebu na n'ume wheel adiana ga-agbanwe site na Inverter. The ọnụ ọgụgụ nke gbawara wiil na arụnyere ike nwere ike ịdị iche dabere na ụdị.
Qingdao Antai arụpụta ọtụtụ ụdị, si nta na a Itie obosara nke 500 mm, ruo 1.500 mm nke bara uru n'obosara.
Loading na ebutu nke ọrụ iberibe nwere ike mere aka ma ọ bụ site na akpaka iga systems positioned tupu ma ọ bụ mgbe, ma ọ bụ site na ígwè ọrụ, si metal waya ntupu ebu.
The igwe bụ akpaghị aka na ukwuu na-arụpụta.
Gbara n'ume igwe na-aga n'ihu metal waya ntupu ebu maka akpaka ọgwụgwọ nke marbles, konkiri na imewe nke ciment ngwaahịa, eke nkume.
Ọrụ iberibe na-etinye na-eyi elu-eguzogide metal waya ntupu ebu na shot blasted na otu akụkụ, site na ọgbụgba ọkụ ụlọ.
Speed ​​ukpụhọde nke ebu na gbawara wheel a na-achịkwa site na Inverter.
The ọnụ ọgụgụ na ọnọdụ nke gbawara wheel nwere ike ịgbanwe dabere na jiometrị na na-arụ ọrụ iberibe (mgbe ụfọdụ ọ na-arịọ na na ọgbụgba ọkụ nke elu n'akụkụ, na ụfọdụ ndị ọzọ na-mpụta n'akụkụ).
Loading na ebutu nke ọrụ iberibe na ebu nwere ike mere aka ma ọ bụ site na akpaka clamps.
Na kwesịrị ekwesị na usoro akara na ụdị shot eji na shot gbawara igwe, ọ bụ omume na-emepụta dị iche iche n'elu risịrị na-emepụta "ochie" mmetụta na marble nkume na "ohia-hamering" mmetụta na simenti na ngwaahịa.
Ọ bụrụ na akụrụngwa bụ adabara gị workpiece, biko na-agwa anyị na-esonụ infromation:
1) Olee ụdị workpiece ga ị ọcha?
2) The size of workpieces (n'ogologo, obosara na ịdị elu nke kacha workpiece, Ogologo, obosara na ịdị elu nke kacha nta workpiece?)
3) Olee otú ọtụtụ ndị na-arọ nke kacha na kacha nta workpiece?
4) Biko gwa anyị gị chọrọ ihicha arụmọrụ?
Dị ka gị Infomation, ndị kasị mma na ígwè ọrụ a ga-mere maka gị workpieces.
Previous: bogie (table Trolley) shot ọgbụgba ọkụ igwe
Aluminium Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Doo Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Na-aga n'ihu ala ebu gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Ugboro abụọ nko Shot ọgbụgba ọkụ Machine
H Doo Sho t ọgbụgba ọkụ Machine
H Doo Steel Structure gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Hanga nko Type gbara ọgbụgba ọkụ Machine
hanga gbara ọgbụgba ọkụ Machine
hanga Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Nghọta Chain Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Nghọta Chain Type gbara Blast Machine
nko shot ọgbụgba ọkụ Machine
Nko Type gbara Blast nhicha Machine
nko Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Monorail nko Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Q38 Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Q69 Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Qh69 shot ọgbụgba ọkụ Machine
ala ebu Shot ọgbụgba ọkụ Machine
gbara ọgbụgba ọkụ Equipment
Gbara ọgbụgba ọkụ Machine N'ihi Steel Structure
Gbara ọgbụgba ọkụ Machines N'ihi Steel ibé
Single nko Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Steel Structure Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Structural Steel Shot ọgbụgba ọkụ Machine
wheel Rims Shot ọgbụgba ọkụ Machine